[Umbono wokuqala] I-Plaza yaseYunding/Iifestile ezikumgangatho ophezulu ukuya kwisilingi/iifestile ezikwindawo entle/Inokupheka/Kufuphi nesikhululo sikaloliwe esinesantya esiphezulu/Ikholeji yaseXuchang/Wanda Plaza/ins Fengyangguangyiju - I-Airbnb
[Umbono wokuqala] I-Plaza yaseYunding/Iifestile ezikumgangatho ophezulu ukuya kwisilingi/iifestile ezikwindawo entle/Inokupheka/Kufuphi nesikhululo sikaloliwe esinesantya esiphezulu/Ikholeji yaseXuchang/Wanda Plaza/ins Fengyangguangyiju
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu少华
[Iimpawu zeNdlu] Le ndlu ikwiYunding Plaza, kuMbindi wePlains (uphawu olutsha lweSithili saseMpuma) Indlu entsha yagqitywa ngo-2019. Indlu yonke ilula kuyilo. Igumbi lokulala lineefestile zomgangatho ukuya kwisilingi, a ikhitshi elahlukileyo, igumbi lokuhlambela elahlukileyo, amanzi ashushu iiyure ezingama-24, kunye nebroadband enesantya esiphezulu.
Kukho iifestile ezisezantsi ukuya eluphahleni zokujonga phezulu, ezijonge imbonakalo entle yasebusuku yesixeko!
[Amacebiso] Alungele izibini, abahlobo ababini abahamba kunye, kunye nabahlobo abasenyongweni. Iifestile ezikumgangatho ophezulu ukuya kwisilingi ukuze zibonwe Ikomityi yekofu ngemini enelanga.Kumnandi kakhulu ukufunda incwadi!
[Mayela nendawo] Uluntu lubekwe kwisithili seshishini esingundoqo kwiSithili saseMpuma, sinezothutho eziphuhliswe kakuhle, kwaye sikufutshane neSikhululo sikaLoliwe esinesantya esiphezulu sase-East Xuchang College. IWanda Plaza, 360 Plaza, urhulumente kamasipala ungaphakathi komgama wokuhamba.
[Mayela nesithili soshishino] Igumbi liseYunding Plaza, Central Plains (IiNdibaniselwano eziNtsha kwiSithili saseMpuma), kumgama wokuhamba weWanda Plaza kunye neXintian 360 (ukubukela iimuvi, ukuthenga, ukutya, ukuthenga)
[Mayelana nokutya] Kukho isixeko esineshwamshwam kunye nevenkile yokutyela yamaTshayina kumgangatho wokuqala weqonga elisezantsi. Indawo yokutyela yaseNtshona, indlu yebhiya. Isitalato iChongqing Food kumgangatho wesithathu! Ecaleni kwayo kukho isitalato esidumileyo sokutya, iSitalato iXuefu, apho kudityaniswa khona iindidi ngeendidi zamashwamshwam, iindawo zokutyela, neembiza ezishushu zokosa inyama. Ukutya kwasekuseni, isidlo sasemini kunye nesidlo sakusihlwa!
[Mayela neendawo zokupaka] Kukho iindawo zokupaka iimoto ezirhafelwayo ezinkulu emhlabeni kunye neendawo zokupaka eziphantsi komhlaba ezirhafelwayo ngezantsi. Indawo yokupaka yasimahla: Kwindlela yemoto engeyiyo eyemoto ejongene nesakhiwo, kukho iindawo zokupaka simahla ezikhethwe lisebe lolawulo lwendlela (zininzi iindawo zokupaka)
[Malunga nevenkile enkulu] Kukho eyona venkile idumileyo eXuchang, iFat Donglai Supermarket, kumgangatho osezantsi kwesakhiwo. Kwaye Fat Donglai iiyure ezingama-24 ekhemesti
Lo mhlaba useYunding Plaza, Central Plains.Indlu yorhwebo enentsapho enye ayinangxaki njengendawo yokuhlala, ikhuselekile kwaye iluncedo, kwaye inokufikelela simahla. Vula ifestile, udlamkile kwaye uphumelele, vala ifestile, uthule kwaye kulula ukuphila. Ikhululekile kwaye inokuhlala
Yonwabela ngokupheleleyo yonke indawo yokuhlala.Zijonge, ikhuselekile kwaye iluncedo. Ikhitshi elizimeleyo, indawo yokupheka yasimahla. Iiyure ezingama-24 zamanzi ashushu, iWiFi enesantya esiphezulu, izixhobo zombane ezipheleleyo zasekhaya, indawo yokupaka efanelekileyo, kunye nokungena.
Ibekwe ngezantsi kwisithili seshishini saseZhongyuan Yunding Plaza. I-Fat Donglai Supermarket, iSixeko soMdlalo weVidiyo, isiXeko sokutya, i-Oscar Cinema, iGym. Kukho i-gourmet night market ngokuhlwa. Isitalato saseXuefu ecaleni kwayo sisitalato sokutya esaziwayo saseXuchang, siqokelela isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sakusihlwa, iindawo zokutyela ezinkulu nezincinci, kunye neentlobo ngeentlobo zokutya!
Ikufuphi kakhulu neWanda Plaza kunye ne360 Plaza, kumgama wokuhamba. Kukho neebhasi ezininzi ezithe ngqo
Isikhululo sebhasi sisezantsi kwaye indlela yokuhamba ilungile. Ukuthenga, ukuthenga kunye nokuzonwabisa zonke ziluncedo kakhulu!
Umbuki zindwendwe ngu- 少华
Door smart ikhowudi lock, self check-in, ikhowudi umnyango utshintshwa undwendwe ngalunye
Wamkelekile ukubonisana nokunxibelelana nangaliphi na ixesha
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Xuchang